Axmed Karaash oo daah-furay shirka Baahinta qorshaha Istaraatiijiyada 3-aad ee Xafiiska Difaaca xuquuqda Aadanaha (Sawiro) – Radio Daljir
Axmed Karaash oo daah-furay shirka Baahinta qorshaha Istaraatiijiyada 3-aad ee Xafiiska Difaaca xuquuqda Aadanaha (Sawiro)
Juunyo 23, 2021 2:59 g 0
Daahfurka baahinta qorshaha istaraatiijiyada Saddexaad ee Xafiiska Difaacaha Xuquuqul Aadanaha Puntland waxaa kaloo ka soo qaybgalay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Barlamaanka Puntland, Guddiyaha Xafiiska Difaacaha xuquuqul aadana Puntland, Xubno ka tirsan Golaha Wasaaradda, Guddoomiyaha isutaga Ururada bulshada rayidka ah,Aqoonyahno iyo xeel dheerayaal dhanka xuquuqul insaanka ah wuxuuna ahaa shir u muhiim ah bahada xuquuqul insaanka Puntland.
Garyaqaan Siciid Cabdi Muumin Guddoomiyaha Xafiiska Difaacaha xuquuqul aadanaha Puntland oo ka hadlayay furitaanka shirkaani ayaa tilmaamay Muhiimada iyo u jeedada Baahinta Qorshaha istaraatiijiyada Saddexaad Xafiiska Difaacaha xuquuqul aadanaha Puntland.
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Puntland Cabdacasiis Cismaan Cabdullahi ayaa dhankiisa Bogaadiyay shaqada Muhiim ka ah ee xafiiskaani iyo sida dhow ee uu la shaqeeyo hay’ada sharci dajinta Puntland.
Madaxda ururada bulshada rayidka ah ayaa dhankooda tilmaamay sida uu xafiiskaani uga qayb qaato u doodista dulmanayaasha iyo inta tabarta daran ee u baahan cadaalada.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland axmed Cismaan Cilmi Karaash oo shirkaani daahfurayay ayaa cadeeyay shaqada adag ee xafiiskaani iyo in uu qaatay kaalintiisii u qareemida dulmanayaasha ilaalinta sharciga iyo helida cadaalad lagu wada qanacsan yahay.
Warka Fiidnimo iyo Faadumo dagan, Daljir Bosaaso (dhegayso)
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo magacaabay Guddi heer Wasiiro ah oo ka tala bixiya xaaladda Gobolka Hiiraan